Taliyaha Booliska oo 70 Milyan ku Wareejiyay Guddida Taakulleynta Abaaraha | Dhaymoole News
Taliyaha Booliska oo 70 Milyan ku Wareejiyay Guddida Taakulleynta Abaaraha
Hargeysa (Dhaymoole): Taliyaha ciidanka booliska Jamhuuriyadda Somaliland sareeye Guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan, ayaa ku wareejiyay gudiga ka soo kabashada abaaraha qadar lacageed oo dhan 70 milyan (todobaatan milyan) oo shilinka Somaliland ah.
Waxaanu taliyuhu tilmaamay in lacagtan laga soo ururiyay askarta, saraakiisha, min dable ilaa taliye, lacagtaas oo ay ugu tala galeen inay kaga qayb qaataan gurmadka loogu jiro taakulaynta dadka abaaruhu haleeleen.
Munaasibad loo sameeyay wareejinta lacagtan ay ciidamadda boolisku soo bixiyeen oo shalay ka qabsoontay xarunta taliska guud ee ciidamadda booliska ee magaaladda Hargaysa, waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidamadda booliska, hogaamadda iyo saraakiisha iyo sidoo kale wasiirka diinta iyo awqaafta oo xubin ka ah gudiga taakulaynta abaaraha, oo isagu taliyaha lacagta kala wareegay.
Sareeyo guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan, oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxa uu yidhi “Kulankii lagu qabtay madaxtooyada ee uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ee ahaa ka soo kabashada abaaraha anagoo ka jawaabayna.
Ciidanka boolisku wuxuu kaga qayb qaatay lacagtan hortee-na taala, lacagtaas oo laga soo ururiyay min askari dable ah iyo taliyeyaasha. Lacagtan oo dhan 70 milyan (todobaatan millyan) oo shilinka Somaliland oo aanu ku wareejinayno wasiirka diinta iyo aw-qaafta xubina ka ah gudida ka soo
Wasiirka diinta iyo aw-qaafta Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, oo isagu taliska booliska lacagtaa qaadhaanka ah kala wareegay ayaa ciidanka booliska uga mahad celiyay sidii ay mar walba dadkooda ugu damqanayaan ugana qayb qaadanayaan taakulayntooda.
Waxaanu yidhi “Waxay ciidanka boolisku balan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan gar-gaarka iyo taakulaynta barnaamijka ka soo kabashada abaaraha oo ciidanka min sarkaal ilaa dable ay lacagtaasi ka wada timid oo aan ahayn tii ugu horaysay.
Ciidanka boolisku wuu ka qayb qaata iyagoo wakhtigooda iyo awood waxay leeyihiin isugu geynaya ilaalinta nabad-galiyada, hada-na kama hadhaan inay gacan ka geystaan ka soo kabashada abaaraha oo ah mashruuc aad iyo aad u mihiim ah”.
Dhinaca kale taliyaha booliska ayaa bulshada ugu baaqay inay si nabad-galiyo ah ay ku qaatan kaadhadhka codbixinta oo 8-da bisha ka bilaabmi doona goboladda Togdheer iyo Maroodijeex.
Taliye Cabdillaahi Fadal waxaa uu bulshada ugu baaqay inay si nabad-galiyo leh ay ku qaataan kaadhadhka codbixinta oo 8-da bishan ka bilaabmaya magaalooyinka Hargeysa iyo Burco. waxaanu yidhi “Waxaa bilaabmaya 8-da bishan ka bilaabmaya bixinta kaadhadhka codbixinta, waxaan bulsho-weynta reer Somaliland u soo jeedinayaa inay kaadhadhka qaataan, amniga-na ay ilaaliyaan oo ay dhawraan, lana shaqeeyaan ciidanka booliska, waana in ay dadku safafka si habsimi leh u galaan, gaar ahaan caasimada Hargaysa iyo caasimada labaad ee Burco. Dadku waa in ay gacan siiyaan ciidamadda booliska lana shaqeeyaan sidii hore-ba looga bartay.” Ayuu yidhi C/laahi Fadal.
Taliyaha booliska waxa kale oo uu ka hadlay imtixaanka fasaladda 8-aad ee dugsiga dhexe oo Sabtidii todobaadkan dalka ka bilaabay, waxaanu sheegay in ay si nabad-geliyo ah ku soo dhamaadeen.
“Sidaad wada og tihiin, waxaa dalka socda imtixaanadii shahaadiga ahaa ee fasalada afraad iyo sideed, kuwii fasalada sideedaad waxay ku dhammaadeen si nabad-galiyo ah, kuwa kale-na (dugsiga sare) ilaa beri (maanta) ayaanu eegeynaa in ay soo dhamaadaan, waxaanu ciidanku heegan u yahay ilaalinta amniga guud iyo hawlaha imtixaanadka” ayuu yidhi sareeye guuto C/laahi Fadal.